Grade-3.. ၊ Grade-6 …သင်တန်းတွေဟာ… လူသတ်ကွင်းဖြစ်နေသလား? – ရှအေလငျး
ပ ညာရေးဝန်ြ ကီးဌာနရဲ့ Grade-3 ၊ Grade-6 သင်တန်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းဖြစ်နေသလား?
အ ခု တစ်လော ပညာရေးဌာနမှာ Grade-3 . Grade-6 သင်တန်းတက်ရောက်ရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမတွေဟာ များလာနေပါတယ်…
မြန် မာနိုင်ငံရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ ရာသီဥတု အပူဒဏ်ကို အံတုပြီး သင်တန်းတက်နေကြရတာ…
ဒီေ န ရာ မှာ ရောဂါအခံရှိသောဆရာဆရာမများ၊ အသက်ကြီးသောဆရာဆရာမများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆရာမများ အနေနဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ အပူဒဏ်ကြောင့် မလိုလားအပ်သော ပြဿ နာများ ၊ အသက်သေသည်အထိ ဖြစ်နေကြရပါတယ်….
မေ န့ က ဆရာမလေးတဟ်ယောက် Grade-3 သင်တန်းမှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်…
ယော က်ျားဖြစ်သူကို ဖုန်းဆက်ခေါ်တော့ ယောက်ျားက ဆိုင်ကယ်နဲ့လာ၊ဆိုင်ကယ်Accidentဖြစ်တယ်
ဒီေ န့ ကြားရသတင်းက ညောင်ဦးမြို့နယ်က ဆရာမကြီးတစ်ယောက် Grade-3သင်တန်းတက်နေစဉ်မှာ ဆုံးပါးသွားတယ်…
အ ရင် ခရိုင်အဆင့်မှာ တနင်္သာရီတိုင်းက ဆရာကြီးတစ်ယောက် Grade-3 သရက်ခရိုင်သင်တန်းမှာ လက်ထောက်ပညာရေးမှူးဆရာကြီးတစ်ယောက် ရခိုင်ပြည်နယ်က ဆရာကြီးတစ်ယောက် မလိုလားအပ်ဘဲ အသက်သေဆုံးခြင်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းလို ဖြစ်နေပါပြီ…
ဒီ အ ပူ ဒ ဏ်အောက် စာသင်ခန်းတွေမှာ ပန်ကာမရှိ၊ရေမီးမပြည့်စုံ ချို့ချို့တဲ့တဲ့ နေပြီး သင်တန်းတက်နေကြတဲ့၊ အသက်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးတွေအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ မပြောနဲ့ ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာတောင် သနားငဲ့ညှာစိတ်၊ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တို့နဲ့ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းတောင် မရှိတဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပါ…
အ ခု G3.G6 သင်တန်းဟာ လေးရက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်…
၁၀ ရက် ကျန်ပါသေးတယ်..
သ တင်း ဆိုးတွေတော့ မကြားချင်တော့ပါဘူး ဆရာဆရာမတို့ရေ…
ဂ ရု စိုက်နေထိုင်ကြပါခင်ဗျ…
ပ ညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေလည်းအေးအေးဆေးဆေးနေကြပါ…
သေ ဆုံးသွား တဲ့ ဆရာဆရာမတွေအတွက်ခင်ဗျားတို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပါ…
အောင်မြင်အောင်ကျင်းပနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်စကားနဲ့ ကျေနပ်နေကြပါ…
ဦးရဲမင်းထွန်း – အလယ်တန်းပြ G6သင်တန်း မင်းဘူးခရိုင်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
Credit – ရဲရင့်ထွန်း
ပညာရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ Grade-3 ၊ Grade-6 သငျတနျးတှဟော လူသတျကှငျးဖွဈနသေလား?
အခုတဈလော ပညာရေးဌာနမှာ Grade-3 . Grade-6 သငျတနျးတကျရောကျရငျး ကှယျလှနျခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမတှဟော မြားလာနပေါတယျ…
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဆိုးရှားလှတဲ့ ရာသီဥတု အပူဒဏျကို အံတုပွီး သငျတနျးတကျနကွေရတာ…
ဒီနရောမှာ ရောဂါအခံရှိသောဆရာဆရာမမြား၊ အသကျကွီးသောဆရာဆရာမမြား၊ ကိုယျဝနျဆောငျဆရာမမြား အနနေဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ အပူဒဏျကွောငျ့ မလိုလားအပျသော ပွဿ နာမြား ၊ အသကျသသေညျအထိ ဖွဈနကွေရပါတယျ….
မနကေ့ ဆရာမလေးတဟျယောကျ Grade-3 သငျတနျးမှာ ကိုယျဝနျပကျြကတြယျ…
ယောကျြားဖွဈသူကို ဖုနျးဆကျချေါတော့ ယောကျြားက ဆိုငျကယျနဲ့လာ၊ဆိုငျကယျAccidentဖွဈတယျ
ဒီနေ့ ကွားရသတငျးက ညောငျဦးမွို့နယျက ဆရာမကွီးတဈယောကျ Grade-3သငျတနျးတကျနစေဉျမှာ ဆုံးပါးသှားတယျ…
အရငျ ခရိုငျအဆငျ့မှာ တနင်ျသာရီတိုငျးက ဆရာကွီးတဈယောကျ Grade-3 သရကျခရိုငျသငျတနျးမှာ လကျထောကျပညာရေးမှူးဆရာကွီးတဈယောကျ ရခိုငျပွညျနယျက ဆရာကွီးတဈယောကျ မလိုလားအပျဘဲ အသကျသဆေုံးခွငျးတှဟော လူသတျကှငျးလို ဖွဈနပေါပွီ…
ဒီအပူဒဏျအောကျ စာသငျခနျးတှမှော ပနျကာမရှိ၊ရမေီးမပွညျ့စုံ ခြို့ခြို့တဲ့တဲ့ နပွေီး သငျတနျးတကျနကွေတဲ့၊ အသကျသဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ ဆရာကွီး၊ဆရာမကွီးတှအေတှကျ ကူညီထောကျပံ့ပေးဖို့ မပွောနဲ့ ဝမျးနညျးကွောငျးသဝဏျလှာတောငျ သနားငဲ့ညှာစိတျ၊ကိုယျခငျြးစာစိတျတို့နဲ့ ထုတျပွနျပေးခွငျးတောငျ မရှိတဲ့ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနပါ…
အခု G3.G6 သငျတနျးဟာ လေးရကျပဲ ရှိပါသေးတယျ…
သတငျးဆိုးတှတေော့ မကွားခငျြတော့ပါဘူး ဆရာဆရာမတို့ရေ…
သဆေုံးသှားတဲ့ ဆရာဆရာမတှအေတှကျခငျဗြားတို့ မသိခငျြယောငျဆောငျနပေါ…
အောငျမွငျအောငျကငျြးပနိုငျပါတယျဆိုတဲ့ ဝမျးမွောကျဖှယျစကားနဲ့ ကနြေပျနကွေပါ…
ဦးရဲမငျးထှနျး – အလယျတနျးပွ G6သငျတနျး မငျးဘူးခရိုငျ၊မကှေးတိုငျးဒသေကွီး
ရွှေ မဲပေါက်တယ်လို့ လိမ်ပြီး.. ရွှေအတုလာပို့သူ… ရဲကစောင့်လို့ ကွိခနဲနေအောင် ဖမ်းခံရ..
ဆယ်တန်းဖြေဆိုသည့် သမီးဖြစ်သူထံ ထမင်းချိုင့်ပို့ရာမှ သေဆုံးခဲ့သူ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုး
“မူကြိုကျောင်းမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးလေးအတွက်ဥပဒေဘောင်အပြင်ကနေ တရားစွဲခံပြီး လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ လင်းလင်း”
“သားကို အရှက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား လွမ်းရေးကြောင့်...
“အရမ်းလန်းတဲ့ အိမ်အသစ်ထဲက ရေချိုးခန်းကို ကြွားလိုက်တဲ့ ပိုပို(ဗီဒီယို)